Paucos - 拉丁语 - 科萨语 翻译和实例
您搜索了: paucos (拉丁语 - 科萨语)
uhlale naye iintsuku ezithile, bude bubuye ubushushu bomkhuluwa wakho,
Athi kubo uYesu, Zingaphi na izonka eninazo? Bathi ke bona, Zisixhenxe, neentlanzana ezimbalwa.
Wayengenako ukwenza na mnye umsebenzi wamandla khona apho, kwakuphela ukubeka izandla phezu kwemilwelwe embalwa, wayiphilisa.
Wesuka uDavide, waya yena namadoda akhe, wabulala kumaFilisti amadoda angamakhulu amabini. UDavide wazizisa iinyama zokwaluswa zawo, wazinika ukumkani zingangoko zingako, ukuba abe ngumyeni kukumkani. USawule wamnika ke uMikali intombi yakhe, yangumkakhe.
non fui non sum non curo (拉丁语>英语)manholes (英语>斯洛文尼亚语)gusto kong matuto mag luto (他加禄语>英语)informal settler (英语>他加禄语)mikrobiologi (马来语>简体中文)santas (英语>俄语)kaninkød (丹麦语>瑞典语)niloko nya ako at pinaasa (他加禄语>英语)coquus est laetus (拉丁语>英语)badhai ho aapko (印地语>英语)anti pollution (他加禄语>英语)జవాబు (泰卢固语>英语)strawberry fruit (英语>尼泊尔语)hellästi (芬兰语>瑞典语)suka blyat (俄语>英语)for educational purposes only (英语>他加禄语)sana hindi ka nagsaw sa akin (他加禄语>英语)aapke jaisa (印地语>英语)tum kahan chali gayi thi (印地语>英语)música del corazón (西班牙语>克丘亚语)tangkap pencuri (马来语>英语)unremitting (英语>意大利语)memudaratkan (马来语>简体中文)edilmeleri (土耳其语>俄语)বাংলা xxvbo (孟加拉语>英语)